Orinasa azo entina - Mpanamboatra azo entina any Shina, mpamatsy
Ilay mpandahateny Bluetooth dia natao ho an'ny fialamboly. Azonao atao ny mankafy mozika na antso an-tànana maimaimpoana ao amin'ny efitrano fandriana, ao an-dakozia, na eo am-pandroana. Kely sy matevina izy io, mora entina mankaiza.
Izy io dia manohana ny filalaovana Bluetooth sy ny lalao karatra TF, azo alaina ho an'ny format MP4 / WMA / WMV mainstream. Miaraka amin'ny kinova Bluetooth 5.0 dia mamindra am-pilaminana izy ary misy ho an'ny fitaovana Bluetooth 99%.
Ny tsy manam-paharoa dia ny fihodinanan'ny faribolana mba hanitsiana ny habeny. Vaovao sy mora. Entana tsara ho an'ny fitaovan'ny mpianakavy izany.
Ny mpandahateny Bluetooth tsotra boribory dia manohana ny lalao Bluetooth sy ny lalao AUX, azo alaina amin'ny endrika MP4 / WMA / WMV. Ny kinova Bluetooth 5.0 dia mitondra fampitana feo tena marin-toerana, avo 3 heny amin'ny fandefasana hafainganana ara-dalàna.
Izy io dia manana fiasan-tsaina tsy manan-tsahala amin'ny antso an-tanana, afaka miantso an-tariby ianao mandritra ny efi-trano, lakozia, efitrano fandrianao na mandritra ny raharaha ataonao ao an-trano. Miaraka amin'ny fananganana batterie dia afaka miasa hatramin'ny 6hrs izy io.
Raha misafidy izany amin'ny orinasa fampiroboroboana marika ianao dia manana faritra marevaka lehibe hanehoana ny sary famantarana anao.
Ity mpandahateny Bluetooth ity dia maodely mahafinaritra ho an'ny fampiroboroboana ny logo. Azonao aseho amin'ny jiro LED ny sary famantarana anao, ary manana safidy loko jiro 4 ianao, manga, maitso, mena sy fotsy. Isaky ny ampiasain'ny mpanjifa an'ity mpandahateny Bluetooth ity dia haseho ny sary famantaranao.
Azo ampiasaina amin'ny filalaovana Bluetooth sy ny filalaovana karatra TF, misy amin'ny endrika MP4 / WMA / WMV, ary miaraka amin'ny kinova Bluetooth 5.0 dia mifanaraka amin'ny fitaovana Bluetooth 99% izy io.
Izy io dia manana fiasan-tsaina an-tariby antso maimaim-poana, manome anao ho afaka hiantsoana rehefa feno ny tananao. Fitaovana tena mahafinaritra ao amin'ny fianakaviana izy io.
Ity mpandahateny Bluetooth modely ity dia natao ho an'ny fety mafana fo, hihira ary handihizana. Manarona 200㎡ mahomby, mora mahay amin'ny trano an-kalamanjana, fety, fivarotana ary sehatra hafa. Amin'ny fampiasana diaphragm bas lehibe sy mpandahateny roa sosona dia manambatra izy roa mba hamorona basika mahery vaika 3D sy hankafizanao ny onjam-peo mihetsiketsika sy ny feo manodidina ny cinematic qualité tsy misy fatiantoka HIFI. Famolavolana portable azo zakaina, mora entina toy ny fety mandehandeha izay azonao atao ny mankafy mihira sy mandihy. Jiro miloko fety mahafinaritra manaraka ny gadona mozika.
Izy io dia azo lalaovina amin'ny Bluetooth, lalaovina U-disk, karatra TF nilalao, nilalao AUX ary fifandraisana microphone, mihaona amin'ny mozika endrika MP4 / WMA / WMV mahazatra.
Ny tsy manam-paharoa dia izy io azo alaina amin'ny famoahana masoandro, na dia milalao eny amin'ny kianja na any ivelany aza ianao dia azon'ny masoandro tarihin'ny herinaratra ho azy fa hanana hery ampy foana ianao.
Ity mpandahateny Bluetooth modely ity dia noforonina tsotra sy madio, fa mitondra anao feo manodidina ny subwoofer 3D HIFI. Ny mpamily 4X, woofers 2 ary tweeter 2, fanamafisam-peo audiophile RMS 26 watts, radiatera bass passive 2 no mahatonga ity boaty ity hiakatra ho bibidia bluetooth. Ahafahanao mankafy mozika, mihira, mandihy ary sarimihetsika tanteraka, mifanentana amin'ny fotoana fialan-tsasatra na fotoana fety ataonao amin'ny namana. Na dia misy antso an-tanana maimaimpoana aza amin'ny alalanao dia ho tsapanao fa eo akaikinao fotsiny ireo namanao na havanao ary mifanatrika miresaka aminao. Ny mpandahateny Bluetooth mety azo alefa dia afaka mamela anao hankafy fotoana sambatra.
Azo sotroina miaraka amin'ny bateria 8000mAh izy, miasa mandritra ny fotoana ela, afaka mankafy tanteraka mozika ao an-trano, any an-tokotany ianao na hitondra azy eny ivelany any amin'izay ilanao azy. Izy io koa dia azo ampiasaina ho banky herinaratra vonjy maika ho an'ny telefaona, takelaka, solosainao ary fitaovana elektrika hafa. Rehefa any ivelany any ho any ianao, miaraka amin'ilay mpandahateny bluereo miaraka aminao, tsy hanana ahiahy ianao raha mila herinaratra amin'ireo fitaovana elektrikao ianao.
Miaraka amin'ny teknolojia Bluetooth 5.0, mamindra haingana sy marimaritra kokoa, saingy kely kokoa ny fanjifana herinaratra, mifanentana amin'ny ankamaroan'ny fitaovana Bluetooth rehetra. Ny mpandahateny Bluetooth dia tsy mifanandrify amin'ny filalaovana Bluetooth fotsiny, fa koa ny lalao karatra TF sy ny lalao AUX, ahafahanao mankafy indrindra. Fitaovana elektrika tsara ho an'ny fotoana falifaly sy fiainana tsara kokoa.
Ity mpandahateny Bluetooth modely ity dia natao indrindra ho an'ny teatra an-trano kely, famolavolana fijoroana karatra telefaona finday, vokarin'ny feo hi-fi falifaly. Izy io dia mandray ny firafitry ny lavaka fanamafisam-peo, miaraka amin'ny radiator matetika, mamokatra feo stereo HIFI, mahatonga ny kalitaon'ny feo ho mavitrika sy mazava amin'ny kristaly. Ankafizo ny sarimihetsika sy ny hira eo am-pandriana, any an-tokotany sy amin'ny fotoana fialan-tsasatry ny birao, mankafy feno teatra kely.
Azo alaina amin'ny lalao Bluetooth sy lalao karatra TF. Azo alaina amin'ny endrika MP4 / WMA / WMV. Mifanaraka amin'ireo fitaovana Bluetooth 99%, ary mitondra fampitana feo tena marin-toerana.
Ity mpandahateny Bluetooth modely ity dia azo lalaovina amin'ny Bluetooth, milalao karatra TF ary milalao AUX. Miaraka amin'ny subwoofer 3D HIFI manodidina anao dia afaka mankafy tsara ny sarimihetsika, ny hira ary ny antso an-tariby toy ny mifanatrika ianao. Azonao atao ny mampiasa azy ao amin'ny efitrano fandriana, tokotany, lakozia, fandroana na amin'ny fitsangatsanganana.
Izy io dia miasa amin'ny mozika endrika MP4 / WMA / WMV mahazatra. Miaraka amin'ny vahaolana Bluetooth 5.0, mifanaraka amin'ny fitaovana Bluetooth 99% izy io, ary mitondra fampitana feo tena marin-toerana.
Ny tsy manam-paharoa dia mikasika ny famantaranandro / mifanohitra amin'ny famatovian'ny famantaranandro mba hanitsiana ny habeny, ho tena manokana sy mahafinaritra.
Ity mpandahateny Bluetooth modely ity dia noforonina endrika lamaody, loko ary tantana vita amin'ny endriny mahafinaritra. Azonao atao ny mankafy feo manodidina ny subwoofer 3D HIFI. Ny baomba treble sy dynamique mazava dia mamerina amin'ny laoniny feo, fifaliana mahafinaritra sy tena izy. Ireo mpandahateny stereo 360 ° sy bass feno dia afaka manome ny feon'ny fiainanao. Ireo mpandahateny Bluetooth dia misy mpandahateny fanamafisam-peo stereo 3D sy mpandrehitra signal nomerika mandroso mba hankafizany ny mozika amin'ny volavola rehetra. Na ny habeny feno aza dia toa fampisehoana mivantana. Ho tianao ny fahafinaretan'ny feo manodidina izay entin'ny mpandahateny Bluetooth tsy misy tariby ho anao, toy ny teatra sinema, izay tena fiainana mahafinaritra tokoa amin'ny fihainoana.
Ny mpandahateny Bluetooth tsy misy tariby dia mandray ny Bluetooth 5.0 mandroso indrindra izay afaka manome fifandraisana marin-toerana kokoa, ny fanjifana ambany, ny fiarahana haingana kokoa ary ny fifanarahan'ny rehetra. Na dia amin'ny toe-javatra sarotra aza dia tsy hanelingelina ny famantarana izany. Ny 5.0 Bluetooth dia afaka mifandray amin'ny solosaina finday, telefaona finday, MP3, iPhone, iPad ary solosaina manokana, ary koa fahitalavitra sy fitaovana hafa. Azo alaina amin'ny lalao Bluetooth, lalao U-disk, lalao karatra TF ary lalao AUX. Afaka mankafy sarimihetsika sy mozika ianao, azo alaina maimaimpoana amin'ny antso an-tariby sy radio FM.
Izy io dia azo ampiharina amin'ny hetsika any ivelany, fitaovana fanamarinana rano, ny jiro fanilo LED, ny maody 3, mifanaraka amin'ny ilainao any ivelany, ary ny fiasan'ny banky herinaratra rehefa miseho hameno ny findainao na fitaovana elektrika hafa ianao.
Ity mpandahateny Bluetooth azo sotroina ity dia azo alaina amin'ny lalao Bluetooth, lalao karatra TF, lalao USB ary lalao AUX. Afaka mankafy feo manodidina ny subwoofer 3D HIFI ianao, mihaino hira, mijery sarimihetsika. Na antso an-tanana maimaimpoana aza dia hahatsapa mifanatrika ianao.
Izy io dia misy jiro miloko 6 ho an'ny safidinao, ary ny hazavan'ny 3 isa hahaliana ny fahafinaretanao. Toy ny hazavana amin'ny alina, tsy misy tselatra, arovy ny maso. Ary manana fiasan'ny famantaranandro fanairana izy io.
Ambonin'ny zavatra rehetra, ho fitaovana tsara ho an'ny trano izy io, hanana fiainana tsara kokoa ianao miaraka amin'izany.
Mamboly hazavana, Mamboly Lightin ny zavamaniry, Mitombo ny avotra, Jiro zavamaniry, Mitombo Ligh, Mitombo Lightin,